Ny taridia amin’ny teny frantsay ny “Mirroring a Censored WordPress Blog” (Fanadindoana bilaogy WordPress iray voasivana) · Global Voices teny Malagasy
Ny taridia amin'ny teny frantsay ny “Mirroring a Censored WordPress Blog” (Fanadindoana bilaogy WordPress iray voasivana)
Voadika ny 14 Janoary 2019 4:22 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Oktobra 2010)
Ny fanaovana dika mitovy (fampitomboana ho roa) bilaogy WordPress iray voasivana
Faly ny Global Voices Advocacy mamoaka ny torolalana Mirroring a Censored WordPress Blog (Fanadindoana bilaogy WordPress iray voasivana) amin'ny dikanteny Frantsay. Nosoratan'i Sami Ben Gharbia (talen'ny Global Voices Advocacy), niaraka tamin'i Rebekah Heacock (mpikaroka mpanampy ao amin'ny OpenNet Initiative) ary i Jeremy Clarke (developera web sy mpandravaka WordPress ao amin'ny Global Voices) ity torolalana ity, ary nadikan'ny namantsika bilaogera, Anna Guèye tamin'ny teny Frantsay.
Ity torolàlana ity dia ho an'ireo bilaogera manana “bilaogy WordPress mampiantrano tena* ary mihevitra fa mety ho bahanan'ny sivan'ny fanjakana ny tranonkalan'izy ireo. Ny tanjona dia ny hanampy ireo bilaogera hampiasa tranonkala dindo mba hahatonga ny votoaty voasivana ho hitan'ny mpamaky na dia eo aza ireo sivana ireo. Hita ao ny dingana isan'ambaratonga amin'ny fametrahana dindo ny orizinalin'ny bilaogy WordPress iray voasivana.
Rehefa miditra amin'ireo tranonkala sy bilaogy voarara, dia matetika ny ankamaroan'ireo mpiaro ny fahalalaham-pitenenana antserasera no mifantoka amin'ny fialàna amin'ny sivana amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovana fialàna sivana. Na dia zava-dehibe aza izany, dia tsy ampy ny fampianarana ireo mpiserasera aterineto ny fidifiana amin'ny sivana. Maro ny olona tsy mahafantatra na tsy afa-miditra amin'ny fitaovana fialàna sivana, satria lasa manakana ireo lohamilina proxy sy ireo teknolojia fialàna sivana ireo firenena izay manivana aterineto. Rehefa ampiasaina ny fitaovana fialàna sivana, dia matetika misy fiantraikany amin'ny hafainganam-pandehan'ny aterineto, ka mahatonga ny fidirana aterineto ho mihisatra kokoa any amin'ny toerana izay efa ratsy ny fifandraisana.
Mba hahafahana miditra amin'ny votoatinao, dia tsy afaka miankina fotsiny amin'ny teknolojia fandinganana sivana na ny fahalalana ara-teknikan'ny mpamaky* anao ianao. Ny fanomezan-danja ny filàn'ny mpiseraseranao sy ny fisorahana ny ezaka fanivanana ataon'ny fanjakana no dingana voalohany amin'ny fanatanterahana vahaolana fandinganana amin'ny fomba vaovao izay hahatonga ny votoaty ao amin'ny tranonkalanao ho hitan'ny mpamaky rehetra, na aiza na aiza misy azy ireo.
Ny fomba iray hampitomboana ny fidirana amin'ny tranokala voasakana ho an'ireo mpisera aterineto any amin'ny firenena manivana votoaty an-tserasera dia amin'ny alàlan'ny fanaovana dika mitovy (atao roa na maromaro): mametaka (mandika) ny votoatin'ny tranonkala iray amin'ny anaran-tsehatra na zanan-tsehatra iray hafa. Ny tranonkala dindo dia maneho avy hatrany izay fanovana rehetra natao tamin'ny tranonkala voalohany, ahafahan'ireo mpanoratra blaogy miala ny sivana amin'ny fanomezana toerana maro ahafahan'ny mpamaky miditra amin'ny votoatin'izy ireo.
Mandika mitovy ny votoatinao tsy mila fanadindoana
Ataovy azo antoka ny bilaoginao
Fampidirana ny teknika fanivanana aterineto
Mamantatra ny fomba nanakanana ny bilaoginao
Manadindo ny bilaoginao WordPress
Mahazo sy manamboatra ny anaran-tsehatrao na zanan-tsehatrao vaovao
Mifidy, mitroka sy mametraka ny plugin fanadindoana WordPress
Manamboatra ny plugin
Mamaha ny loza mety hitranga amin'ny laharan'ny pejinao
Milaza amin'ny mpamakinao mikasika ny tranonkala dindo
Duplication à l'identique d’un blog WordPress censuré dia azo trohana amin'ny endrika PDF. Mety mila mametraka ny Adobe Acrobat Reader maimaim-poana ianao raha hijery izany.
Trohy azafady ny torolalana ary ampio izahay amin'ny fandikana izany amin'ny fiteninao.
* Ny bilaogy WordPress mampiantrano tena dia iray amin'ireo tsy ampiantranoina ao amin'ny tolotra fibilaogina maimaim-poana WordPress.com, fa amin'ny lohamilina mitokana mampiasa ny sehatra famoahana WordPress.org. Raha mila fanazavana fanampiny dia jereo ny wordpress.org.